Blanca Valera. Chirangaridzo cherufu rwake. Nhetembo | Zvazvino Zvinyorwa
White Varela aive mudetembi wePeruvia akaberekerwa muLima muna 1926 kwaakafirawo pazuva rakafanana nanhasi muna 2009. Maari memory uye kuyeuka zvinoenda izvi kusarudzwa kwenhetembo Zvebasa rake. Kuiverenga zvakare kana kuiwana.
Kudzidza Mabhuku uye Dzidzo paYunivhesiti yeSan Marcos. Iyo yakavambwa mu Paris muna 1949 uye ikoko akasangana Octavio Zuva, munyori akakonzera zvakanyanya basa rake rekunyora. Paz akamubatanidza nevamwe vadzidzi veLatin America neSpanish. Gare gare akagara Florence naWashington, kwaakashanda semuturikiri uye mutori wenhau.
Chiteshi ichocho chiripo raive bhuku rake rekutanga raakaburitsa muna 1959. Gare gare vakaenderera Masikati y Waltzes uye kumwe kureurura. Muna 1978 yekutanga kuumbwa rebasa rake mu Villain song. Uye pakupedzisira yake anthology kubva muna 1949 kusvika muna 1998 muna SaMwari mune chero chinhu.
Blanca Valera akahwina mibairo senge Octavio Zuva yenhetembo uye Essay, iyo Granada guta kana García Lorca naReina Sofía weIbero -America Nhetembo.
Kune hafu yezwi
Ini ndinoteedzera aya ekunze mitsara
pasi pemweya mutete waMbudzi
pasi pedenga rakatyoka
Ini ndinogamuchira duel nepati
Iro nhetembo rakatendeka
husiku ndisina kutendeuka musoro
Ndinofambisa mwenje wako
mumvuri wake wemhuka
Ndinohwihwidza kubwinya kwaro
Iyo imwe nguva
inenge yave pamoto
ngatiti wakakunda mujaho
uye kuti mubairo
rwaive rumwe rudzi
kuti hauna kunwa waini yekukunda
asi munyu wako
kuti hauna kumbonzwa vachifara
asi imbwa dzinohukura
uye iwo mumvuri wako
yakanga iri yako chete
uye mukwikwidzi asina kukodzera.
Rudo rwakaita semumhanzi ...
Rudo rwakafanana nemumhanzi
anondidzosera ndisina chinhu,
nenguva inotenderera nekukasira
uye mimhanzi yemberi,
Uye ndinoenda kurufu rwusipo,
iyo inonzi horizon mubhokisi rangu.
Nguva dzose nekusingaperi kunze kwenguva.
Pedyo netsime ndakasvika,
ziso rangu diki rakasuruvara
yakadzika yakadzika, mukati.
Ini ndaive padhuze neni
izere neni, kukwira nekudzika,
mweya wangu unorwa neni,
kurova ganda rangu,
unogona kundiudza chero chinhu
tenda haina kukosha
chakakosha ndechekuti iwe fambisa miromo yako mudenga
kana kuti miromo yako ifambise mhepo
ngano nyaya yako muviri wako
pamaawa ese pasina chibvumirano
semurazvo usingatarisi senge
Rega ino yakasviba mwaka wesipo uye misodzi ipfuure
Zviite simba. Ramba uchidonha pamusoro pevhu. Gadzira nhare
Kubva kuhuori hwese uye kurwadziwa
Nekufamba kwenguva unenge uine mapapiro uye muswe wenzombe yakasimba kana
nzou yekubvisa kusahadzika kwese, zvese
nhunzi, nhamo dzese.
Zvitarise mumvura. Dzidza kuvenga iwe pachako sewe.
Uri. Yakashata, isina, yekutanga pamakumbo mana, ndokuzoenderera mberi
vaviri, ipapo hapana.
Kambaira kumadziro, teerera kumumhanzi uripakati
Vadaidze mazana emakore, mapfupa, hanyanisi.
Mashoko, mazita, haana basa.
Teerera kumumhanzi. Ndiwo mumhanzi chete.
Rufu rwakanyorwa roga
mutsetse mutema mutsetse muchena
zuva igomba mudenga
dzidza kuona mudanga
nyeredzi imba alga
mai huni gungwa
mune mwando uri pamutsago
chimedu chechingwa muhoro
musikana murombo achiri kukiiwa
Ndarama yacho Violet yebhuruu
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Blanca Valera. Chirangaridzo cherufu rwake. Nhetembo
Cecilia Carchi akadaro
Varela anonyora kune "zvipoko" izvo zvaakasika iye pachake. Achikurudzirwa nehupenyu hweSartrean, nhetembo yake inoratidza kusagutsikana kwemazuva ese, asi zvishoma nezvishoma anova asingatarisi uye anodisisa asingazvibvumiri kufashukira kusiri madikanwa, kunyangwe kushoma. Iwo mashiripiti ezwi rake akabatanidzwa pamwe nenhoroondo nharaunda iyo yaanofanira kurarama pamwe neyakaiswa epurasitiki iyo ichave iri yakakosha chikamu chehupenyu hwake uye kuvaka kwemhuri nucleus.
Pindura Cecilia Carchi